Azia Atsimo · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Aogositra, 2011
Pakistana 29 Aogositra 2011
Pakistana 28 Aogositra 2011
India 25 Aogositra 2011
Pakistana 18 Aogositra 2011
Ny 8 Jona 2011, maty voatifitra ny tovolahy iray 19 taona, tena tfitra akaiky tokoa nataonà Rangers Pakistane iray tao Karachi. Nivoaka anefa ny lahatsary izay nahatonga ny maro hisaina fa tsy nitondra fitaovam-piadiana izany io tanora io. 2 volana monja taorian'ilay zava-nitranga, voaheloka ho faty ilay manamboninahitry ny rangers voampanga nanao ny tifitra.
Pakistana 17 Aogositra 2011
14 Aogositra ny Andron'ny Fahaleovantenan'i Pakistan, izay manamarika ny daty nialàna tamin'ny fanjanahana Britanika ary nahatonga azy ho firenena afaka. Amin'ity taona ity, nankalazaina tamin'ny firavoravoana be ny 14 Aogositra, tsy teny an-dalana ihany fa teo amin'ny tontolon'ny bilaogy ihany koa. Bilaogera mahafatrapo nandefa lahatsoratra momba an'i Pakistan, mivavaka ho amin'ny fandrosoany sy ny fahombiazany.
Bangladesh 16 Aogositra 2011
Bangladesh 15 Aogositra 2011